Nolosha Isnuujinta ee Ciise, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Maanta waxaan jecelahay inaan kugu dhiiri geliyo inaad dhegeysatid digniinta uu Paul siiyay kaniisadda Filibiin. Wuxuu ka codsaday inay wax qabato waxaanan ku tusi doonaa waxa ay arintani ku saabsan waxaana aan kaa codsanayaa inaad go aansato inaad sidooda oo kale sameyso.
Ciise gebi ahaanba wuxuu ahaa Ilaah iyo gebi ahaanba aadanaha. Qoraal kale oo ka hadlaya luminta ilaahnimadiisa ayaa laga heli karaa Filiboy.
"Waayo, fikirradiinnii baa idinku dhex jira, kaas oo ah Masiixa Ciise Masiix, oo isagu markuu u ekaanayay xagga Ilaah, uma uu xajin sidii inuu ahaa Ilaah; laakiin isagu wuu is-muujiyey, oo wuxuu qaatay ekaad addoon, isna wuxuu la mid noqday isagoo nin, oo muuqashadiisiina dibadda ahayd sida nin, wuu is hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto. Saas aawadeed waa in Ilaah isaga ka sarreeyaa dadka oo dhan, oo wuxuu isaga siiyey magac ka sarreeya magacyada oo dhan, in magaca Ciise ee ah jilbaha cirka iyo waxa jannada ku jira iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaba ay ku wada qumman yihiin, Ciise Masiix waa Sayidku, ammaanta Ilaah, (Filiboy 2,5-11).
Waxaan jeclaan lahaa inaan laba shay oo shaydan ku saleeyay aayadahan:
1. Waxa Bawlos ka leeyahay dabeecadda Ciise.
2. Sababta uu sidaas u leeyahay.
Kadib markaan go’aansanay sababta uu wax ugaga sheegay dabeecadda ciise, waxaan leenahay go'aankeena sanadka soo socda. Si kastaba ha noqotee, qofku si fudud ayuu u fahmi karaa macnaha aayadaha 6-7 ee Ciise ku siiyay ilaahnimadiisa guud ahaan ama qayb ahaan. Laakiin Bawlos taas ma uusan dhihin. Aynu falanqeyno aayadahan oo aan aragno wuxuu dhab ahaan leeyahay.
Isagu wuxuu la jiray suuradda Ilaah
Su’aal: Muxuu ula jeedaa sawirka Ilaah?
Aayadaha 6-7 waa aayadaha kaliya ee Axdiga Cusub ee ku jira ereyga Giriigga ee Bawlos
"Gestalt" waa la istcimaalay, laakiin Griigga Giriigga AT wuxuu ka kooban yahay erayga afar jeer.
Xaakinnadii 8,18 "Markaasuu wuxuu Sebah iyo Salmunnac ku yidhi, Raggii aad Taaboor ku dishay maxay ahaayeen? Waxay yidhaahdeen: Waxay la mid yihiin adiga oo kale, oo mid kastaa u qurxoon yahay sidii carruurta boqorka.
Job 4,16 "Isagu halkaasuu taagnaa, mase garanaynin muuqaalkiisa, waxaa jiray nin indhaha ku hoyda, oo waxaan maqlay cod cod leh:"
ISHACYAAH 44,13 “Oo nijaar baa lagu hayaa tilmaamaha, oo wuxuu ku soo jiiday qalin, oo wuxuu ku shaqeeyaa mindiyo, oo wuxuu ku soo jiitaa durdurka, Oo wuxuu ka dhigaa nin u eg nin quruxdiisa uu ku nool yahay guri.
Daanyeel 3,19 "Nebukadnesar wuu cadhooday, wejigiisiina waa beddelmay Sadrach, Mesach iyo Abednego. Wuxuu amar ku bixiyay in foornada laga dhigo toddoba jeer ka sii kulul kuwii hore.
Bawlos macnihiisu waa (ereyga qaab ahaan) sidaa darteed ammaanta Masiixiga iyo haybaddiisa. Wuxuu lahaa sharaf iyo haybad, iyo cayda ilaahnimada oo dhan.
In la siman yahay Eebbe
Isticmaalka isbarbardhiga ugu fiican ayaa laga heli karaa Johannes. Yooxanaa 5,18 "Sidaa aawadeed Yuhuuddu waxay haddana isku dayeen inay dilaan, sababtu ma ahayn sabtidii uu jebiyey oo keliya, laakiin waxay ahayd inuu Ilaah ugu yeedhay Aabbihiis, oo isagu isagu isagu wuxuu la mid yahay Ilaah.
Haddaba Bawlos wuxuu ka fikiray Masiixa oo runtii Ilaah la siman. Si kale haddii loo dhigo, Bawlos wuxuu sheegay in Ciise uu lahaa haybadda buuxda ee Ilaah oo uu asaas ahaan ahaa Ilaah. Heerka aadanaha, tani waxay u dhigantaa in la yiraahdo qof ayaa muuqaalka kore ka muuqda xubin ka mid ah qoyska boqortooyada oo runtii xubin ka ahaa qoyska boqortooyada.
Waan ognahay qof kasta oo u dhaqma sidii xubin ka mid ah qoyska boqortooyada, laakiin aan ahayn, waxaanan aqrinaa xubno ka mid ah qoysaska boqortooyada oo aan u dhaqmin sida xubin reerka boqortooyada ah. Ciise wuxuu lahaa labadaba “muuqaalka” iyo dabeecadda ilaahnimadiisa.
loo qabtay sidii dhac
Si kale haddii loo dhigo, wax aad u isticmaali karto faa iidadaada. Way u fududahay dadka mudnaanta leh inay u isticmaalaan xaaladdooda waxtarka shakhsiyadeed. Waxaa lagu siin doonaa daaweyn doorbid ah. Bawlos wuxuu leeyahay in kasta oo Ciise uu ahaa Ilaah qaab ahaan iyo muuqaal ahaan, haddana kama uusan faa'ideysan xaqiiqadan sida aadanaha oo kale. Aayadaha 7-8 waxay muujinayaan in aragtidiisa ay iska soo horjeedday.
Ciisena wuu isdhiibay
Muxuu yidhi? Jawaabtu waa: waxba. Isagu dhammaantiis wuxuu ahaa Ilaah. Ilaah ma joojin karo inuu Ilaah yahay xitaa in yar. Kama uusan tagin sifooyinka rabbaaniga ah ama awooda uu haysto. Wuxuu sameeyay mucjisooyin. Wuxuu akhriyi lahaa maskaxda. Wuxuu adeegsaday xooggiisa. Isaguna wuxuu ku muujiyey ammaantiisii.
Waxa Bawlos halkan ugala jeedaa waxaa laga arki karaa aayad kale oo uu isla eraygan ugu adeegsanayo "u hadlay".
1 Kor. 9,15 Laakiin ma aanan isticmaalin. Sidoo kale uma aanan qorin tan si aan u ilaaliyo. Waxaan doonayay inaan u dhinto si ka wanaagsan sida uu qof i sumadeeyay!
Wuxuu ka tanaasulay xuquuqdiisi oo dhan. (GN1997-Übers.), «Kama uusan adkayn xuquuqdiisa. Maya, wuu ka tanaasulay » (Waxaan rajeyneynaa Dhamaan tarjumayaasha.). Bini aadam ahaan, ciise uma isticmaalin dabeecadiisa rabbaani ah iyo awoodiisa rabbaani ah ee waxtarka u leh. Wuxuu u adeegsaday inuu injiilka ku wacdiyo, oo uu wax baro xeryaha, iwm - laakiin waligiis ha u fududayn noloshiisa. Si kale haddii loo dhigo, isagu uma adeegsanaynin xooggiisa faa'iidadiisa.
Tijaabada adag ee lamadegaanka.
Markuu uguma yeerin dab samada ka yimid si uu u burburiyo magaalooyin aan wanaagsanayn.
Iskutallaabta. (Wuxuu yiri inuu u yeeri lahaa ciidan malaa'igo ah difaaciisa.)
Isagoo si tabaruc ah uga tanaasulay dhammaan faa'iidooyinka uu heli karayo sidii Ilaahay inuu si buuxda uga qaybqaato aadamnimadeena. Aynu akhrino aayadaha 5-8 mar labaad oo aan aragno sida u cad qodobkan hada jira.
Filibos. 2,5-8 «maxaa yeelay, fikirradiinnii isagaynu idinku dhex jirin, kaas oo isaga xagga Ciise Masiix ku jira; 6Isagu markuu u eg yahay xagga Ilaah, isagu umana uu ekaanin inuu bool yahay inuu Ilaah la mid noqdo. 7 laakiin wuu isdiiday, oo wuxuu qaatay suurad addoon, oo wuxuu noqday nin la mid ah, muuqashadiisana nin u eg, 8 wuuna is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto.
Kadib Bawlos wuxuu ku soo gabagabeeyey hadalkii uu sheegay in Ilaah Masiixa ka sara kiciyey dadka oo dhan. Philip. 2,9
Sidaa awgeed ayaa Ilaah isaga uga sarrayaa dadka oo dhan, oo wuxuu isaga siiyey magac ka sarreeya magacyada oo dhan. Oo sidaas oo ah magaca Ciise jilbihiisa oo dhan inta jannada ku jirta iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeya iyo dhammaan afafka oo dhan ayaa leh, in Ciise Masiix yahay Rabbiga, ammaanta Ilaaha Aabbaha ah.
Marka waxaa jira saddex marxaladood:
Xuquuqda Masiixa iyo mudnaantiisa sida Eebbe.
Xulkiisa ayaa ah inuusan ku dhaqmin xuquuqahan, laakiin inuu noqdo mid addoon ah.
Kordhinta ugu dambaysa ee qaab nololeedkan.
Fursad - u diyaarsanaanta adeegga - kordhin
Haddaba su’aasha ugu weyni waa maxay sababta aayaddani ugu jiraan Filiboy. Marka hore, waa inaan xasuusano in Filibos ay tahay warqad loo qoray kaniisad gaar ah sabab gaar ah waqti gaar ah. Sidaa darteed, waxa Bawlos ku leeyahay 2,5: 11 waa inuu lahaadaa wax la xiriira ujeeddada xarafka oo dhan.
Marka hore, waa inaan xasuusnaano markii Bawlos markii u horreeyay uu booqday Filibiin oo uu kaniisadda halkaa ka bilaabay, in Paul la qabtay (Falimaha Rasuullada 16,11: 40). Si kastaba ha noqotee, xiriirka uu la lahaa Kaniisada wuxuu ahaa mid aad u diiran bilowgii. Filiboy 1,3: 5-4 "Waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa mar alla markii aan adiga kugu fikiro, 5 anigoo had iyo goorba farxad ku ducaysanaya, markay tahay tukashadayda kulligiin markaan idiin duceeyo, iyo wehelnimada injiilka laga bilaabo maalin ilaa maanta."
Wuxuu warqaddan ka qoray xabsiga Rome. Filiboy 1,7 "Waxay qumman tahay inaan kulligiin idinka fikiro, maxaa yeelay, qalbigayga ayaan kugu xanaaqay, oo kulligiin nimco baad ku wadaagtaan xagga xidhxidhnaanta iyo xagga injiilka iyo adinkayga. »
Laakiin isagu niyad jab iyo niyad jab kama muuqdo, laakiin waa mid faraxsan.
Filiboy 2,17-18 «Laakiin haddii laygu daadguxiyo sida allabari cabniin ah oo loo bixiyo allabaryada iyo shuqulka wadaadnimada ee iimaankaaga, kulligiin waan ku faraxsanahay oo waan ku faraxsanahay kulligiin, 18 oo weliba sidaas oo kale waad ku farxi doontaan, oo waad ila rayraysaan.
Xitaa markii uu qoray warqaddan, waxay sii wadeen inay si xamaasad leh u taageeraan. Filibos. 4,15-18 «Idinka Filibos waxaad kaloo ogaataan in bilowgii injiilka markii aan Makedoniya ka soo baxay aan kiniisad ila qotonsan daqliga iyo kharashyada idinka kaliga ah mooyaane; 16 Haah, mar iyo laba jeer ayaad Tesaloniika ii soo dirtay si aad u daboosho baahiyadayda. Ma aha inaan hadiyad i weyddiisto, laakiin waxaan doonayaa midhaha xaggiinna ku kordhaya. 17 Anigaa haysta wax kasta iyo barwaaqo badan, Waa laygu xanaaneeyey ilaa markii aan hadiyaddaada ka helay Epafroditos, oo ahaa nin dhib badan oo Ilaah ku farxay. »
Codka warqaddu wuxuu muujinayaa cilaaqaad dhaw, bulsho jacayl Christian xoog leh, iyo rabitaan inaad u adeegto oo u xanuunsato injiilka. Laakiin sidoo kale waxaa jira calaamado muujinaya in wax waliba aysan ahayn sidii ay ahaan lahaayeen.
Filiboy 1,27 «Kaliya noloshaada ku istaahila injiilka Masiix, si in kastoo aan u arko oo aan kuu arko ama aan uga maqnaado kaaga maqlo inaad isku ruux ku adag tahay oo aad si buuxda ugu la dagaallamayso iimaanka injiilka. . »
"Noqo noloshaada" - Griig. Politeuesthe macnaheedu waa gudashada waajibaadkeeda muwaadin ee bulshada.
Bawlos walaac ayuu ka qabaa maxaa yeelay wuxuu arkaa in fikradaha laga qabo bulshada iyo jacaylka mar uun ka muuqday Filibiin inay kacsan yihiin. Khilaafka guduhu wuxuu khatar gelinayaa jaceylka, wadajirka iyo bulshada.
Filiboy 2,14 "Wax walbo samee oo ha ka gunuuneyn ama muranla'aan."
Filibiin. 4,2-3 «Waxaan kula talinayaa Evodia oo waxaan ku waaninayaa Syntyche inay ahaadaan isku hal Rabbiga.
3 Oo weliba waxaan kaloo kaa baryayaa, addoonkaaga aaminka ah in aad iska dhawrtid kuwa ila diriray tan, iyo weliba Clemens iyo shaqaalahayga kale oo magacyadoodu ku qoran yihiin kitaabka nolosha.
Marka la soo koobo, bulshada muuminiinta ah waxay la halgameen markay qaar noqdeen dad is jecel oo kibir badan.
Filibiin. 2,1: 4-2 «Haddii ay jirto waano ku jirta Masiixa, waxaa jira dhiirrigelin jacayl, waxaa jira wehelnimo xagga Ruuxa, waxaa jira diiranaan iyo naxariis, 3 si aan farxaddayda u dhammaystiro anigoo isku maan ahaanaya, oo jacayl la mid ah. leeyihiin, si wadajir ah iyo maskaxda ugu mid ah. 4 Waxba ha ku samaynina iskala'aan ama damac xumo, laakiinse is-hoosaysiiya in midkiinba midka kale iska sii haysto.
Waxaan aragnaa dhibaatooyinka soo socda halkan:
1. Khilaaf ayaa jira.
2. Waxaa jira loollan xagga awoodda ah.
3. Waxaad tahay qof han weyn.
4. Waxay mala awaalaan iyagoo ku adkaysanaya jidadkooda.
5. Tani waxay muujinaysaa is-qiimayn is-dhaafsiisan.
Waxay ugu horreyn dantooda ka leeyihiin danahooda gaarka ah.
Way fududahay inaad ku dhacdo dhammaan goobahaan. Waxaan ku arkay iyaga aniga iyo kuwa kale sanadihii la soo dhaafay. Sidoo kale way fududahay inaad indho la'aato in fikradahaasi qaldan yihiin Masiixi ah. Aayadaha 5-11 asal ahaan u fiirso tusaalaha Ciise ee ah in hawada laga fogeeyo dhamaan kibirka iyo is-jeclaysiga si fudud noogu soo duulaya.
Bawlos wuxuu yidhi: Ma u malaynaysaa inaad ka fiican tahay dadka kale oo aad u qalanto ixtiraam iyo maamuus bulshada dhexdeeda ah? Bal u fiirso sida uu Masiixu weynaa uguna xoogga badnaa runtii. Bawlos wuxuu yidhi: Adigu ma doonaysid inaad u gudbiso dadka kale, ma doonaysid inaad u adeegto aqoonsi la'aan, waad xanaaqsan tahay maxaa yeelay kuwa kale waxay kuu tixgeliyaan inaad tahay wax bixin? Ka fikir waxa Masiixu doonayo inuu sameeyo la'aantiisa.
William Hendrick buugiisa aad ufiican ee Wareysiyada Wareysiga, ayuu ku warbixiyay
ku saabsan daraasad uu sameeyay oo ku saabsan kuwa ka tagay kaniisadda. Dad badan oo 'koritaanka kaniisadda' dadku waxay istaagaan albaabka hore ee kaniisadda waxayna dadka weydiiyaan sababta ay u yimaadeen? Sidan, mid ayaa rabay inuu isku dayo inuu la kulmo 'baahida loo qabo' ee dadka aad rabto inaad gaarto. Laakiin in yar, haddii ay jiraan, istaagaan albaabka dambe si aad u weydiiso sababta ay uga baxayaan. Taasi waa waxa uu Hendricks sameeyey, natiijooyinka daraasaddiisuna waxay mudan yihiin akhris.
Markii aan aqriyay faallooyinka kuwii ka tegey, waan la yaabay (oo ay weheliso faallooyin waxoogaa faallooyin ah oo xanuun badan oo ka imanaya qaar ka mid ah dadka fikirka lihi ee tagay) waxyaabo qaarkood oo dadka qaarkii ka filayeen kaniisadda. Waxay rabeen dhammaan nooc kasta oo waxyaabo aan muhiim u ahayn Kaniisadda; sida loogu bogaadiyo, loo duudsiyo 'loona sugo dadka kale inay la kulmaan baahiyahooda oo dhan oo aan lahayn wax waajib ah oo ah inay daboolaan baahiyaha dadka kale. " (The Plain Runti, Janaayo 2000, p.23).
Bawlos wuxuu Masiixiyiinta ugu sheegayaa Masiixa. Wuxuu ku boorinayaa inay ku noolaadaan bulshada dhexdeeda Masiixiyiinta sidii Masiixu ku noolaa. Hadday sidan u sii noolaan jireen, Ilaah baa ammaani doona iyaga siduu Masiix ula sameeyey.
Philipp. 2,5 ilaa 11
"Maxaa yeelay, ruuxu isaguu idinku dhex jiraa, oo xagga Ciise Masiix ku dhex jiray, 6 kan, markuu isagu u eg yahay xagga Ilaah, umana uu ekaanin sidii Ilaah oo kale boolidii. 7 laakiin wuu isdiiday, oo wuxuu qaatay suurad addoon, oo nin buu la mid dhigay, waana muuqashadii nin oo kale, 8 wuuna is hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto. 9 Oo sidaas daraaddeed ayaa Ilaah isaga ugu sarraysiiyey dadka oo dhan, oo wuxuu isaga siiyey magac ka sarreeya magacyada oo dhan, 10 in magaca Ciise jilbihiisa iyo waxa jannada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaba ay ku wada foororsadaan, 11 iyo afaf oo dhan qiran in Ciise Masiix yahay Rabbiga, ammaanta Ilaaha Aabbaha ah. »
Bawlos wuxuu sheeganayaa waajibaadkiisa shaqsi ahaan muwaadin jannada Buuxinta (Boqortooyada) macnaheedu waa inaad naftaada u muujiso sida Ciise u qabtay iyo inaad qaadato doorka addoonka. Mid ka mid ah waa inuusan kaliya dhiibin si loo helo nimco, laakiin sidoo kale loo xanuunsado (1,5.7.29-30). Filibiin. 1,29 "Maxaa yeelay, Masiixa awgiis, waxaa laydin siiyey nimcada ma aha inaad isaga rumeysaan, laakiin sidoo kale waxaad isaga ku xanuunsataan isaga aawadiis."
Waa inaad diyaar u noqotaa inaad u adeegtid kuwa kale (2,17) in "lagu shubto" - in la helo dabeecad iyo qaab nololeed ka duwan qiyamka adduunka (3,18-19). Filibiin. 2,17 "Laakiin haddii laygu daadguro sida qurbaan oo kale ah oo loo bixinayo allabariga iyo shuqulka wadaadnimada ee iimaankaaga, kulligiin waan ku faraxsanahay oo waan ku faraxsanahay."
Filibiin. 3,18Waayo, in badan baa socda, sidii aan marar badan idiin sheegay, laakiinse hadda waxaan ooyayaa anigoo ah sidii cadaawayaashii iskutallaabta Masiixa, 19 Dhamahoodu waa baabba ', oo Ilaahooduna waa calooshooda, oo waxay ku faantaa ceebtooda, oo caqliyadoodana waxay u jeediyaan xagga dhulka.
Waa inaad muujisaa is-hoosaysiin dhab ah si aad u fahanto in ahaanshaha "Masiixa" macnaheedu tahay inaad tahay addoon maxaa yeelay Masiixu wuxuu dunida u soo galay inuusan ahayn Sayid laakiin sidii addoon .
Waxaa jira khatar ah in qofku noqdo qof dantiisa gaarka ah leh iyada oo laga duulayo kuwa kale, iyo sidoo kale in la soo baxo isla weyni oo ka timaadda kibir qofka xaaladdiisa, kartidiisa, ama natiijooyinka guusha.
Xal u helista dhibaatooyinka cilaaqaadka ka dhexeeya dadka dhexdooda wuxuu ku qoran yahay shaqaalaysiin ku lug lahaansho kuwa kale ah. Ruuxa isbixinta waa muujinta jacaylka jacaylka kale ee lagu sharxay Masiixa, kaasoo ahaa “addeecidda dhimashada, haa dhimashadana”!
Addoomada dhabta ahi way is muujiyaan. Wuxuu xaq kasta u leeyahay inuusan dooran waddada addoonka, laakiin wuxuu sheegan karaa xaaladdiisa sharci.
Bawlos wuxuu noo sheegayaa in aysan jirin meel ay ku fiicnaadaan diinta oo sama fal aan si dhab ah ugu dhaqmin doorkeeda adeeggiisa. Sidoo kale ma jirto meel loogu talagalay cibaadada oo aan abuurin ama xitaa gebi ahaanba ku shubin danaha dadka kale.